Ka Nyaw Po: 5/2/10 - 5/9/10
ဒီကေဘီအေ အချင်းချင်း သဘောထားကွဲ လူထု စစ်ပွဲဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်
/ 5/08/2010 02:00:00 PM / Comments: (0)
တိုးတက်သော ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်မတော် (ဒီကေဘီအေ) အချင်းချင်းကြားတွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင် ပြောင်းဖွဲ့စည်းရန် သဘောထားကွဲလွဲမှု ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့အချို့က ခွဲထွက်ရန် သတင်းထွက် ပေါ်လာသဖြင့် ကျေးရွာသားများက တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမည်ကို စိုးရိမ်နေကြသည်။
ကော့ကရိတ်မြို့နယ် တပ်မဟာ (၅) ထိန်းချုပ်ရာဒေသများတွင် ဒီကေဘီအေက တပ်အင်အားများကို စုစည်း ထားသဖြင့် တပ်မှူးတပ်သားများကို စစ်ရေးသတိဖြင့်နေရန်၊ ကျေးရွာသားများကိုလည်း သတိဝီရိယဖြင့် နေကြရန် တပ်လှန့်ထားသည်ဟု ဒီကေဘီအေ အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
“အဲဒါ ကျနော်မကြားရသေးဘူး အဖြေပေးတာ။ ဘေးကလူပဲ ပြောတယ်၊ ဒီကေဘီအေ လက်ခံပြီ ဘာ ညာ။ ဒါပေမယ့် လူကြီးတွေက လက်ခံလား မခံလက်လား ကျနော်တို့ကိုတော့ ဘာမှမပြောသေးဘူး။ ဥပမာ နယ်ခြားစောင့်လုပ်မလား၊ မလုပ်ဘူးလား၊ ပြီးတော့ အခြေအနေကတော့ ကျနော်တို့ ဘယ်လို လုပ်ကိုင်ရမှာလဲ သူတို့က ဘာမှမပြောသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် စစ်သားဟာ စစ်သားနဲ့ တူအောင် နေရ မယ်။ သတိဝီရိယနဲ့နေရမယ်၊ အဲလိုပဲ။ အဲဒီအခြေအနေမျိုးပဲ ကျနော်တို့ကို ပြောတယ် လူကြီးက။”
ကေအဲန်ယူထိန်းချုပ်ရာဒေသ တပ်မဟာ ၃၊ တပ်မဟာ ၅နှင့် တပ်မဟာ ၇ ဘက်တွင် စစ်မက် ဖြစ်ပွားမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ဒေသခံကျေးရွာသားအချို့ တောထဲတွင် ကြိုတင်ပုန်းရှောင်နေကြကာ အများစု ထွက်ပြေးရန် အ ဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားပြီး စောင့်ကြည့်နေကြသည်ဟု ကေအဲန်ယူ တပ်မှူးကြီး တဦးက ပြောသည်။
“ရွာသားတွေကတော့ စိုးရိမ်တာပေါ့။ စိုးရိမ်တယ်ဆိုတာ ဖွ(သတိပေး)ထားတာပဲ ရှိပါတယ်။ ပြောင်း တာတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဒီနယ်စပ်တလျှောက်ဘက်ပေါ့။ ရွာသားတွေ တချို့ပြောတာပေါ့။ အဲလိုပဲ ကြားတယ်။ တကယ်လို့ စစ်ဖြစ်လို့ရှိရင် သူတို့ဒုက္ခရောက်မယ်ပေါ့။ ရွာသားတွေက ခါတိုင်း အရင် အတိုင်း သူတို့ကလည်းပဲ ကြောက်ထားစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီလိုနည်းနည်း သတင်းတွေ ကြားရင် အဲ လိုမျိုး ပြေးချင်တာပဲ ရှိတာပေါ့။”
နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရန် လက်မခံသည့် ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့အချို့က ကေအဲန်ယူနှင့် ပူးပေါင်းမည့် သူများလည်း ရှိသလို သီးခြားခွဲထွက်မည့်သူများလည်း ရှိသည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ် နေသည်။
ယင်းအပေါ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကေအန်ယူ၏ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ၁ ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက ယခုလို ပြောသည်။
“သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ဆက်လှုပ်ရှားမယ့်အပေါ်မှာပဲ သူလုပ်နေလိမ့်မယ်လေ။ ကျနော်ကတော့ အဲလိုပဲ တွက်တယ်။ အခုလက်ရှိ တွေ့ရှိနေတဲ့ အနေအထားကတော့ ခန့်မှန်းခြေကတော့။ ကျန်တဲ့ကောင်တွေ ကတော့ ဘာမှမလှုပ်ရှားလည်း ရတယ်။ သူ့ဟာသူ နကိုယ်ကလည်း သူ့ဟာသူ ဘာတပ်ရင်း ဘာညာ ဆိုပေမယ့်လို့ သေနတ်ကိုင်ထားပြီး ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်ပြီးတော့ ကိုယ်ခွင်မှာ ကိုယ်စိုးမိုးပြီးတော့ ဘုရင်လုပ်နေကြတဲ့ လူတွေ။ အခုချိန်ထိတော့ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ သူခွင်နဲ့သူတော့ နေနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ အဲဒါကတော့ မြွေမသေ တုတ်မကျိုးပေါ့။ ကျနော်တို့ဆီကိုတော့ ဘယ်သူ့မှ လာပြီးတော့ ကူပါကယ်ပါဆိုပြီး သို့မဟုတ် ကျနော်တို့ကတော့ ဟိုကဇာတ်လမ်းတလမ်းပြတ်ပြီ ကျုပ် တို့ကို ပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုပြီး လာတဲ့ကောင်တွေ တယောက်မှ မတွေ့သေးပါဘူး။”
အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ဒုတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းဦး ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့နှင့်ဒီကေဘီအေ ခေါင်းဆောင် အချို့ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့က ဌာချုပ်ဖြစ်သည့် မြိုင်ကြီးငူတွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရန် ဆွေးနွေးကြရာ ဒီကေဘီအေ တပ်မှူးအချို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိဟု ယင်းအဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သူများက ပြောသည်။
မြိုင်ကြီးငူ ဆရာတော် ဦးဆောင်သည့် ဒီကေဘီအေသည် ကေအဲန်ယူမှ ခွဲထွက်ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ တပ်အင်အား ၇၀၀၀ ကျော်ရှိဟု သိရှိရသည်။
ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ခွင့်ရမှသာ Kurt Campbell မြန်မာနိုင်ငံခရီး ဆက်မည်
/ 5/08/2010 01:50:00 PM / Comments: (0)
08 May 2010 (VOA မှ)
တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့ အတွက် အမေရိကန် အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် တဦး လာမယ့် ရက်ပိုင်းတွေ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီခရီးစဉ် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ချွင်းချက်တွေ ကတော့ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် David Gollust အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက သတင်းပေးပို့ထားတာကို ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
အရှေ့အာရှရေးရာ အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kurt Campbell ဟာ လောလောဆယ် သူ့ရဲ့ အာရှခရီးစဉ် အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားကောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနကနေ ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီခရီးစဉ်အတွင်းမှာ စစ်အစိုးရ အရာရှိတွေနဲ့သာမက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခွင့်ပေးမှသာလျှင် သူ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်တဲ့။ Kurt Campbell ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလက မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ စစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရော အထိန်းသိမ်းခံ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါ တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတ အိုဘားမား အစိုးရက အထီးကျန်လှတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ ကြိုးပမ်းနေတာရဲ့ တစိတ်တဒေသ အဖြစ်နဲ့ မစ္စတာ ကာ့ ကန့်(မ်)ဘဲ(လ်) မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်လို့ ကတိတွေပေးပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အဲန်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လို့မရအောင် ဥပဒေတွေကို တမင်ဖန်တီး ပြဌာန်းထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုဘက်ကနေ အခုတလော ဝေဖန်တာတွေ တိုးလာတာ တွေ့ရပါတယ်။
လောလောဆယ် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ကို ရောက်နေတဲ့ မစ္စတာ ကန့်(မ်)ဘဲ(လ်) က ရှေ့သီတင်းပတ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်ဖက်အာဏာပိုင်တွေကို တွေ့ဆုံဖို့ ရှိတဲ့အပြင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အဲန်အယ်လ်ဒီ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပါ တွေ့ဆုံခွင့်ရမှသာလျှင် ဒီခရီးစဉ်ကို သူ သွားမယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
စစ်အစိုးရ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေဟာ အတိုက်အခံတွေအပေါ် မတရားရာ ကျတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပီဂျေ ခရောလေး (P.J. Crawley) က အခုလို ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
"ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက ဒီမိုကရေစီနဲ့ တရားမျှတရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေကြသူတွေ အားလုံး အားကျဖွယ်ရာ အဖြစ်နဲ့ အဲန်အယ်လ်ဒီ နဲ့ အဲန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မျှော်လင့်ချက် မီးရှူးတန်ဆောင် ပမာ ရပ်တည်ခဲ့ကြတာ အနှစ် ၂၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ အဲန်အယ်လ်ဒီ အနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးအတွက် ဆက်လက် သယ်ပိုးသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားတာကိုလည်း ကျနော်တို့ ချီးကျူးပါတယ်။ အဲန်အယ်လ်ဒီ အပါအ၀င် နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် ကောင်းကျိုးကို တည်ဆောက်ကြရာမှာ မဆုတ်မနစ် ကြိုးစာနေကြသူတွေ အားလုံးနဲ့အတူ ကျနော်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမှာပါ။"
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ဖို့ ခြေလှမ်း လှမ်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ရောက်အောင် မြန်မာ အာဏာပိုင် တွေက ဒီအခြေအနေတွေကို တမင် ဖန်တီးခဲ့တာကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အတော်လေးကို စိတ်ပျက်မိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီဟာ အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းတခု အနေနဲ့ တရားဝင် ရပ်တည်နေဆဲလို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ရှုမြင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း ခုလို ပြောပါတယ်။
"အဲန်အယ်လ်ဒီ ပါတီဟာ ဒီမိုကရေစီအရ အတိုက်အခံတွေရဲ့ တစိတ်တဒေသ အဖြစ် တရားဝင် ရပ်တည်နေဆဲလို့ ကျနော်တို့က ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှုမြင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ အတိုက်အခံတွေနဲ့ရော တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပါ အနစ်သာရ ပြည့်ဝတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက် ကျနော်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့သမျှ အစည်းအဝေးတွေကတဆင့် အရိပ်အမြွက် ပြောဆိုထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။"
မြန်မာစစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးတွေ စစ်ဘက်ရာထူးတွေကနေ အနားယူ ပြီးတော့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဝင်တွေအဖြစ်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ကြေညာလိုက်တာကြောင့်မို့လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ဘ၀င်မကျ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တွေအတွင်းက ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
/ 5/08/2010 01:48:00 PM / Comments: (0)
VOA မှ (08 May 2010)
လာမဲ့ဘေး ပြေးတွေ့ဖို့အသင့် ဖြစ်ပြီလား
/ 5/08/2010 10:43:00 AM / Comments: (0)
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကရင်ပြည်နယ်၊ ဒူးပလာယာခရိုင်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်း တိုးတက်သော ဗုဒ္ဒဘာသာ ကရင်အမျိုး သား တပ်မတော် (ဒီကေဘီအေ) အခြေစိုက်ရာဒေသ နေရာအတော်များများတွင် နအဖတပ်များ ပြန့်ကျဲနေရာယူနေသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရတပ်များဖြစ်သည့် တပ်မ (၂၂)၊ (၄၄)နှင့် စစ်ကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ်-စကခ (၈)ခုမှ တပ်ရင်းပေါင်း တစ်ရာကျော် မှာ ကရင်ပြည်နယ်တခုလုံးတွင် နေရာယူလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။လက်ရှိအချိန်၌ ထိုဒေသရှိ ဒီကေဘီအေနှင့် နအဖ တပ်တို့သည် တဖက်နှင့်တဖတ် အဆက်မပြတ် အကဲခတ်စောင့်ကြည့်နေ ကြပြီး စစ်ရေးပြင်ဆင်နေကြသည်ဟု ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ(၅)မှ တပ်မှူးတဦးက ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
“ကျနော်တို့အထက် ခေါင်းဆောင်တွေက ကျနော်တို့ကို အမြဲအဆင်သင့်(ရယ်ဒီ)ရှိကြဖို့ အမိန့်ပေးထားတယ်။ နအဖဘက်က အရင် စတိုက်ခိုက်လာရင်တော့ ကျနော်တို့ကလည်း ပြန်တိုက်ဖို့အဆင်သင့်ပဲ”ဟု သူက ဆိုသည်။
နအဖ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းလဲရေးကို လက်မခံဆန့်ကျင်နေသည့် ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ်(ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး) ဦးဆောင်သည့် ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ(၅) လက်အောက်ခံ ကလိုထူးဘောဗျူဟာ(၁)နှင့် တပ်ရင်း (၅)ရင်းတို့သည် အဆိုပါ ဒေသတွင် အခြေစိုက်လျှက်ရှိသည်။
ဧပြီလ ၂၆ရက်နေ့တုန်းက နအဖ အမှတ်(၉) စစ်ကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ခလရ(၁၀၆)တပ်ဖွဲ့သည် ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဖလူးကျေးရွာသူရွာသားများကို သေနတ်ဖြင့် လာရောက်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သောကြောင့် ဒီကေဘီ အေ တပ်မဟာ(၅) လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်လုနီးပါး တင်းမာခဲ့သေးသည်။
ဒီကေဘီအေ၏ နာယကဆရာတော်ကြီး ဦးသုဇနနှင့် ဒီကေဘီအေခေါင်းဆောင်အချို့က နယ်ခြားစောင့်တပ် (ဘီဂျီအက်ဖ်)ကို လက်မခံသည့်ကြားမှ နယ်ခြားစောင့်တပ် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ဖြစ်သည့် ဧပြီလ ၂၈ရက်နေ့မတိုင်ခင် တရက်၌ ဒီကေဘီ အေ ခေါင်းဆောင်အချို့နှင့် နအဖ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ဒုတိုင်းမှူးဖြစ်သူ ကရင်ပြည်နယ် ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်း ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တို့ မြိုင်ကြီးငူအထူးဒေသတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် နယ်ခြားစောင့် တပ်အသွင်ပြောင်းရေးကို ဒီကေဘီအေက ယေဘုယျအားဖြင့် သဘောတူ လက်ခံထားခဲ့ သည်ဟု အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့သူ ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ (၉၉၉) အထူးတပ်ရင်းမှူးက ပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ဘီဂျီအက်ဖ်ကို လက်မခံသည့် မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ်နှင့် ဗိုလ်မှူးကြီးစောမုတ်သုန်တို့ အပါအ၀င် ဒီကေဘီအေ အရာရှိအချို့က ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
နယ်ခြားစောင့်တပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဒီကေဘီအေ အဖွဲ့အတွင်းတွင် လက်ခံသူများနှင့် လက်မခံသူများဟူ၍ သဘောထားကွဲ လွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို လက်ခံခဲ့သည့် ဒီကေဘီအေ ခေါင်းဆောင်အချို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ကျန် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနှင့် တပ်သားများက ကျေနပ်မှုမရှိ ဖြစ်နေသည်။
အမည်မဖော်လိုသူ ဒီကေဘီအေဗိုလ်ကြီးတဦးက “ဒီအခြေအနေအတိုင်းဆိုရင် ဒီကေဘီအေဟာ အော်တိုမစ်တစ် နှစ်ခြမ်းကွဲ တော့မယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကြုံလာမဲ့ အခြေအနေတွေကို ရင်ဆိုင်သွားမှာပဲ။ တိုက်မယ်ဆိုလည်း တိုက် ရမှာပဲ”ဟု ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ကေအိုင်စီကို ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဒီကေဘီအေ၌ စစ်သေနာပတိချုပ် ဗိုလ်ချုပ်စောကျော်သန်း အပါအ၀င် ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူနှင့် အပေါင်းပါအချို့သည် နယ် ခြားစောင့်တပ်ကို လက်ခံထားသူများဖြစ်သည်ဟု ၎င်းတို့နှင့် နီးစပ်သည့်အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လလယ်ခန့်က ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူက ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး တပ်မဟာ(၇)မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စောဂျော်နီထံ ဖုန်းဆက်ရာတွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို လက်မခံဘဲ တိုက်ပွဲများဖြစ်လာလျှင်ကရင်ပြည်သူများ စစ်ဘေးဒဏ်ကို ပြင်းထန်စွာ ခံစားကြရမည်ဖြစ်၍ မည်သို့လုပ်သင့်ကြောင်း မေးလာသည့်အပေါ် “ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ကြည့်လုပ်ပါ။ ဘာမှမပြောတတ်ဘူး” ဟူသည့် တုန့်ပြန်မှုကိုသာ ရရှိခဲ့သည်။
ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ (၉၉၉) ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူသည် နအဖနှင့် ပူးပေါင်း၍ ၂၀၀၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၌ ကေအဲန်ယူ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ဖားအံခရိုင်၊ တပ်မဟာ(၇)ကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတွင် အဓိက စီစဉ်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲအတောအ တွင်း ကရင်ပြည်သူ ၄,၀၀၀ကျော် ၎င်းတို့ရွာမှ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ရသည်။
ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နအဖ စစ်အစိုးရက ၎င်းနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ ကရင်အချင်းချင်း ဖြစ်သည့်ကိစ္စသာဖြစ်ကြောင်း သတင်း မီဒီယာများကို ပြောဆိုခဲ့သည်။
၁၉၉၄ခုနှစ်က ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ)မှ ခွဲထွက်ကာ လက်ရှိ ခန့်မှန်းခြေအင်အား ၅,၀၀၀ရှိသည့် ဒီကေဘီ အေအနေဖြင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးမပြောင်းရေး ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ၎င်းတို့၏ သမိုင်းအပြောင်းအလဲတခုပင် ဖြစ်သည်။
နအဖ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြဌာန်းချက်အရ တပ်မတော်တခုတည်းထားပြီး အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆိုင်ရာ အားလုံးကို အစိုးရစစ်တပ်ကသာ တိုက်ရိုက်ချုပ်ကိုင်ထားမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဒီကေဘီအေအတွင်း၌ လက်မခံနိုင်မှုက ပိုများ သယောင်ယောင် ရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ကိုအောင်သူငြိမ်းက စစ်အစိုးရသည် ဒီကေဘီအေအပြင် ၎င်းတို့နှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲထားသည့် တိုင်းရင်းသားများကို အကျိုးစီးပွားအရ သဘောထားပျော့ပြောင်းသူနှင့် အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်အရ သဘောထားတင်းမာသူဟူ၍ နှစ်ဖွဲ့ခွဲကာ အားနည်းအောင်လုပ်နေသည့်အပေါ် ကေအဲန်ယူနှင့် ပြန်လည်ပူး ပေါင်းသင့်ကြောင်း ယခုလို သုံးသပ်သည်။
“ဒီလို ရှုတ်ထွေးနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို လက်မခံတဲ့ ဒီကေဘီအေအနေနဲ့ မိခင်အဖွဲ့အစည်း ကေအဲန် ယူထဲ ပြန်ပေါင်းသင့်တယ်။ ပြန်လာပူးပေါင်းလာအောင် ကေအဲန်ယူလည်း ပိုပြီး စည်းရုံးလုပ်ဆောင်သင့်တယ်။ သူတို့အနေနဲ့ တိုက်ရိုက်မဟုတ်တောင်မှ တခြားသွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ပြန်လည်ပူးပေါင်းသင့်တယ်”ဟု ဆိုသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဒီကေဘီအေအတွင်း သဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိနေချိန်၌ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က နအဖနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်စောထင်မောင် ကေအဲန်ယူ/ကေအဲန်အယ်လ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီက နယ်ခြားစောင့်တပ် လုံးဝ လက်မခံကြောင်း ဧပြီလ ၂၂ရက်နေ့စွဲဖြင့် နအဖထံ စာရေးအကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအဲန်ယူ) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး(၁) ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက “ဒီကေဘီအေထဲမှာ နယ်ခြား စောင့်တပ်ကို လက်ခံတဲ့အဖွဲ့ကတော့ ဗမာစစ်တပ်က ခိုင်းသမျှလုပ်၊ ကျွေးတာကို စားရမယ်။ နောက် လေး၊ ငါးနှစ်ကြာရင် တပ်မတော်တရပ်ပဲ ရှိရမယ်ဆိုပြီး ထွက်ဆိုရင်လည်း ထွက်ရမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် လက်မခံတဲ့အဖွဲ့ကတော့ စောဘဦးကြီး ချမှတ် ထားတဲ့ မူလေးချက်ကို ဆွဲကိုင်ပြီး ကော်သူးလေပြည်နယ်ထဲမှာ ကေအဲန်ယူနဲ့ ပြန်ပေါင်းစေချင်တယ်”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြော သည်။
ဆက်လက်၍ သူက ဒီကေဘီအေသည် လက်နက်ကိုင်နေသည့် ယောက်ျားကောင်းများဖြစ်ကြပြီး ကေအဲန်ယူနယ်မြေထဲ၌ သစ်ပင်၊ မြစ်ချောင်းမကျန် သိနှင့်ပြီးသူများဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်းတို့၏ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတတို့ကို ပြန်လည်စဉ်းစားသုံး သပ်ကာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်များကို လုပ်စေချင်ကြောင်းလည်း တိုက်တွန်းထားသည်။
တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလာမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်စပ်မှ ရွာသား ၃၀၀ကျော်သည် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ နောက်ဆုံးပတ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်၊ မဲဆောက်မြို့တောင်ပိုင်းရှိ ဝေါ်လေကျေးရွာဘက်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာ ခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရက ၎င်းနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ပေါင်း ၁၇ဖွဲ့အနေဖြင့် နယ်ခြားစောင့် တပ်အသွင်ပြောင်းရေးကို လက်မခံပါက ၁၉၈၉ ခုနှစ် မတိုင်ခင် အခြေအနေသို့ ပြန်ရောက်သွားနိုင်သည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ထား သော်လည်း ၀၊ ကချင်၊ ကိုးကန့်၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ မိုင်းလား အထူးဒေသ(၄) စသည့် အဖွဲ့တို့သည် နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင် ပြောင်းရေး သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည်အထိ လက်ခံခြင်းမရှိသေးပေ။
နအဖ စစ်အစိုးရတပ်များသည် ဧပြီလကုန်ပိုင်းနှင့် မေလဆန်းပိုင်းတွင် မြ၀တီမြို့သို့ တပ်ရင်း ၂၀နီးပါး ထပ်မံ ရောက်ရှိလာပြီး ဒီကေဘီအေတပ်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအခြေစိုက်ရာ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိ ထို့ကော်ကိုးကျေးရွာအနီးတွင် လက်နက် ကြီးငယ်တပ်ဆင်ကာ ခြေကုပ်နေရာယူထားကြောင်း မျက်မြင်သက်သေ လူထုအချို့က ပြောသည်။
လက်ရှိ အနေအထားအရ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်း ပုံမှန်လှုပ်ရှားနေသော ဒီကေဘီအေတပ်များနှင့် နအဖတပ်များအတွင်း တိုက်ပွဲများ အချိန်မရွေး ဖြစ်လာနိုင်သဖြင့် ဒီကေဘီအေအတွက် စိုးရိမ်မိကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့မှန်သည်ထင်သည့်လမ်းကို ဆက် လျှောက်ရန်လည်း ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက ပြောဆိုလိုက်သည်။
ကေအဲန်ယူသည် အင်အားကြီးမားသည့် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်ပြီး ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှစ၍ ကရင်တမျိုးသားလုံး လွတ် မြောက်ရေးနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရန် စစ်အစိုးရကို ယခုအချိန်ထိ လက်နက်ကိုင်စွဲကိုင် တော်လှန်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
မြ၀တီမြို့ ဒီကေဘီအေ အရာရှိတစ်ဦးအိမ်တွင် ဗုံးကွဲ
/ 5/08/2010 12:49:00 AM / Comments: (0)
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မြ၀တီမြို့ရှိ တိုးတက်သောကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်မတော်(DKBA) အရာရှိတစ်ဦး၏ နေအိမ် တွင် ယနေ့နံနက်က ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။
မြ၀တီမြို့ရှိ DKBA တပ်ရင်း(၉၉၉)မှ ဗိုလ်နေစိုး၏ နေအိမ်တွင် ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် မြို့ခံတစ်ဦးက ယခုလိုပြောသည်။
“ဒီကနေ့မနက် တစ်နာရီမှာ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက် (၉၉၉) တပ်ရင်းက ဗိုလ်စိုး(ခေါ်)ဗိုလ်နေစိုး ရဲ့ နေ အိမ်ခြံဝင်းထဲကို လူဝင်သံကြားလို့ ထွက်အကြည့်မှာ ဗုံးကွဲပြီးတော့ အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရသွား တယ်။”
ယင်းကိစ္စဟုတ်မှန်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို မသိရသေးကြောင်း အမည်မဖော်လိုသည့် DKBA အရာရှိတစ်ဦး က ယခုလို အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
“အိမ်မှာကွဲတယ်လို့ပြောတာပဲ။ အများကြီး မထိပါဘူး။ သူတစ်ယောက်ပဲထိသွားတာပါ။ တခြား ထိ ခိုက်ပျက်စီးမှုလည်းမရှိပါဘူး။ အတိအကျတော့ မသိသေးဘူး။ ကျနော်လည်း ခုမှ ခရီးကပြန်ရောက် လို့လေ။”
ဗုံးအမျိုးအစားကို မသိရသေးသလို အခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုလည်းမရှိပါ။ ပေါက်ကွဲစဉ်က ဗိုလ်နေစိုးနှင့် အလှမ်း ဝေးသဖြင့် ခြေထောက်အောက်ပိုင်း၌သာ ဒဏ်ရာရပြီး မြ၀တီဆေးရုံ တွင် ကုသမှုခံယူနေသည်။
မည်သူ့ လက်ချက်ဖြစ်သည်ကို မသိရသေးသော်လည်း လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့က ဗိုလ်နေစိုးနှင့် ဒေသခံ အာဏာပိုင်အဖွဲ့တို့ ရှေးဟောင်းဘုရား ဖမ်းဆီးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာဖြစ်သေးသည်ဟု မြ၀တီမြို့ခံက ယခုလိုပြောသည်။
“သူတို့ ဖမ်းဆီးရေးအဖွဲ့ကတော့ စရဖတို့၊ ဒကစတို့၊ ကျောက်ကာဂိတ်မှာဖမ်းတာပဲ။ ဖမ်းတဲ့ အခါ ကျတော့ စောနေစိုးကပြောတယ်။ ဒီဥစ္စာတွေက ဥပဒေလမ်းကြောင်း အရ ဖြစ်ရမှာပါ ပြောတဲ့ခါကျ တော့ စရဖက ပြန်သွားတာလေ။ စရဖက ပြန်သွားပြီးနောက်မှာ ကျတော့ ရဲက ပြန်လာတယ်။ ရဲက ပစ္စည်းသိမ်းမယ်လုပ်တော့ စောနေစိုးကနေပြောတာ ဖမ်းရဲတဲ့ကောင် ဖမ်းကြည့်။ ဒီပစ္စည်းတွေက အ ကုန်လုံး အတုတွေချည်းပဲ။ ဖမ်းတဲ့ကောင်ကိုလည်း အကုန်လုံး ပစ်သတ်ပစ်မယ်လို့ သူ့တပည့် တွေကို အမိန့်ပေးတော့ ရဲလည်း မဖမ်းရဲဘဲ ပြန်သွားတယ်။”
DKBA တပ်ဖွဲ့အား စစ်အစိုးရမှ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဖိအားပေးနေချိန် အဖွဲ့တွင်း သဘော ထားကွဲလွဲမှုများရှိနေသည့်အတွက် ယခုပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူမည်ဝါ၏လက်ချက်ဖြစ်သည်ကို ခန့် မှန်းရန် ခက်ခဲသည်ဟု မြို့ခံများက ပြောသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုလာမည့် မေလ(၁၀)ရက်နေ့တွင် DKBA နှင့် စစ်အစိုးရတပ် နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ထပ်မံတွေ့ဆုံ ရန်ရှိသည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသော် လည်း သီးခြားအတည်ပြု၍ မရသေးပါ။
/ 5/07/2010 11:57:00 PM / Comments: (0)
ဘဲလေးအက သင်တန်းတက်ချင်သူများ အတွက်......
arzarni blog မှကူးယူဖော်ပြသည်။
ရွှေတူးဖော်ရေး ဒီကေဘီအေ ရပ်တန့်ထား
/ 5/07/2010 05:16:00 PM / Comments: (0)
မေလ ၇ရက်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
ဖာပွန်နှင့် သထုံခရိုင်နယ်စပ်၌ ရွှေတူးဖော်နေသော တိုးတက်ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် (ဒီကေဘီအေ)တပ်ဖွဲ့တို့ သည် မေလဆန်းပိုင်းမှစ၍ ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းကို ရပ်တန့်ထားသည်ဟု ကေအိုင်စီက စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဖာပွန်ခရိုင်ရှိ ရွှေတူးဖော်နေသည့်နေရာအနီးမှ ၀င်းမောင်းရွာသားတဦးက “သဲတွေကို လာသယ်နေတဲ့ ကားတွေ အခု အကုန် ပြန်ပြီ။ သူတို့(ဒီကေဘီအေ)က နောက်နှစ်မှ ဆက်တူးမယ်လို့ ပြောတာပဲ။ ဒီရွှေတူးတဲ့လုပ်ငန်းကို သူတို့က သုံးနှစ်စီမံကိန်းလား၊ ငါးနှစ်စီမံကိန်းလား အဲလိုလုပ်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ကြားတယ်”ဟု ပြောသည်။
ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ရွှေတူးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကို ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခြင်းသာဖြစ်ပြီး လာမည့် မိုးရာသီကုန်ဆုံးလျှင် တဖန် ပြန်လည်လုပ်ကိုင်အုံးမည်ဟု သူက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ယခုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဒီကေဘီအေ (၉၉၉)တပ်မဟာမှ ဗိုလ်မှူးတဦးကို မေးမြန်းရာ ၎င်းအနေဖြင့် မသိရှိကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၉ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလက အင်အား ၆၀၀ခန့်ရှိသည့် ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ(၉၉၉)၊့ (၃၃၃)နှင့် (၆၆၆)လက် အောက်ခံ တပ်ရင်းတို့သည် သစ်ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် ရွှေတူးဖော်ရန်အတွက် ဖာပွန်- သထုံခရိုင်နယ်စပ် ၀င်းမောင်းကျေးရွာအုပ်စု သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ထိုဒေသရှိ မယ်ကလယ့်လော်ချောင်း၌ ရွှေများကို တူးဖော်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့ ရွှေတူးဖော်သည့်ကာလအတွင်း မြစ်ချောင်းထဲမှ သဲများကို မြစ်ကမ်းနဖူးပေါ်၌ စုပုံထားသည့်အတွက် လယ်ကွင်းနှင့် မြစ် ချောင်း ဆက်သွယ်ဖောက်လုပ်ထားသော တူးမြောင်းများ ပိတ်သွားကာ ယခုနှစ် မိုးရာသီ၌ လယ်လုပ်စားနိုင်တော့မည် မဟုတ် ကြောင်းနှင့် ပျက်စီးသွားသော လယ်ယာမြေကွက်များအတွက် ဒီကေဘီအေက လျော်ကြေးပေးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်ထိ လာရောက်ပေးလျော်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ရွှေတူးဖော်သောကြောင့် လယ်ကွင်းပျက်စီးသည့် ရွာများမှာ ဒွယ့်လိုးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ၀င်းမောင်း(၀ါမူ)၊ ကျွန်းပင်ဝင်း(ဖို့ခဲထာ့)၊ မိချောင်းဝင်း(ကွီးတမာ့)၊ သရက်ပင်ဆိပ်(ည့ာဆာ့ဂေါ်ထာ့)၊ မဲပူ(မဲ့ပူထာ့)၊ ဝေါ်လေ၊ ပဒါဒေါင်၊ ခေါ်ကလား စသည့်ကျေးရွာများ ဖြစ်ကြသည်။
/ 5/07/2010 05:15:00 PM / Comments: (0)
အောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်မဲ့ လှေငယ်ဟာ ပြင်ဆင်ပြီ
/ 5/07/2010 03:20:00 PM / Comments: (0)
Karen Information Center (M.ထက်ခေါင်)
(၁) ဤစာစောင်တွင် အမျိုးသားရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တော်လှန်ရေးနှင့် ရန်သူ ဟူသော အခန်းဆက် ဆောင်းပါးကို လအနည်းငယ် မျှ တင်ပြလာခဲ့ရာတွင် ယခုလမှာ ဆောင်းပါးအမှတ်စဉ် (၄)ကို တင်ပြရမည့်လ ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ရေးထားပြီးဖြစ်သော ဆောင်းပါးအမှတ် (၄)နှင့် ပတ်သက်၍ ကျေနပ်နှစ်သက်မှု မရှိသေးသည့်အပြင် စာမူကြမ်း အချက်အလက် လျာထားချက်များ အရ ဆောင်းပါးမှာ အမှတ်စဉ် (၅)အထိ တင်ပြမှ နိဂုံးချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ရာ လက်ရှိ အခြေအနေတွင် ကြားဖြတ်တင်ပြလိုသော အရေးပေါ် အကြောင်းအရာတခု ရှိလာသောကြောင့် ရေးလက်စ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးကို နောက်လကျမှ ဆက်လက် ဖော်ပြ ရတော့မည် ဖြစ်သည်။
လောလောဆယ် အရေးတကြီး တင်ပြလိုသည့် အကြောင်းအရာမှာ ဤစာစောင်၌ ကြိမ်ဖန်များစွာ ရေးသားခဲ့ဘူးသော မဲပြာ ပုဆိုးအကြောင်းအရာမျိုးသာ ဖြစ်သည်။ မုဆိုးနားနီးသောတံငါ တံငါနားနီးသောမုဆိုး၊ ဓားရိုးကို သူခိုးဆုပ်မိပေတော့မည်၊ ကျွန် ခေတ်၏ အငွေ့အသက်၊ မနေ့ကရဲ့ မနက်ဖြန်…၊ ရှင်ခြင်း ဘယ်သို့ မြတ်နိုင်တို့ စသည်…စသည်ဖြင့်၊ ဖန်တရာတေအောင် အနည်းနည်းအဖုံဖုံ နှိုးဆွတိုက်တွန်း ပြောဆိုရေးသားခဲ့ဘူးသော အကြောင်းအရာများလိုပင် ဖြစ်သော်လည်း ယခုလို အလွန် အမင်း အရေးကြီးသည့်အချိန်၌ အခါတရာမက ထပ်ခါထပ်ခါ နှိုးဆော်ရန် အထူးလိုအပ်နေသောကြောင့် ထပ်မံတင်ပြရခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကြားလာရသည့် သတင်းတွေက သိပ်မဟန်။ လက်နက်အားကိုးဖြင့် ဗမာတပြည်လုံး ကျွန်ဇာတ်သွင်းကာ ဗိုလ်ကျမင်းမူနေသည်ကို နှစ်ကာလကြာရှည်စွာ ငြိမ်းချမ်းသောနည်းဖြင့် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့်ရလဒ်၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာ နိုင်ငံ ရေးနည်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းလိုသည့် ရလဒ်အဖြစ်၊ ၎င်းတို့ အဓမ္မ ရေးဆွဲထားသော ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံကို ဇွတ်အတင်း အတည်ပြု လျက် နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရွေးကောက်ပွဲ အတုအယောင်ဖြင့် တရားဝင် ခုန်တက်ရန် မလိမ့်တပတ် ကြိုးစားလာ သော စစ်အုပ်စုကို ပီပြင်စွာ တွေ့လာရပြီး ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ ရုပ်လုံးပေါ်လာပြီဖြစ်သော စစ်အုပ်စုကို ပိုမိုအရောင်လက် အောင် ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုး ရွှေချပေးကြမည့် ပြည်သူ့အသားထဲက လောက်များကလည်း အရှက်ကင်းမဲ့စွာ ခေါင်းပြူလာကြပြီ ဖြစ် သည်။
တော်လှန်သော လူထုနှင့် သတင်းမီဒီယာများက အထပ်ထပ် အခါခါ ပြောနေသည့်ကြားက မတရားမှန်း သိပေမဲ့ အခွင့်အရေး အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရမည်ဟု ဆိုသည့် အခွင့်အရေးသမား တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အချို့ရှိလာသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် မှတ်ပုံတင်ရန် သတ်မှတ်ရက်ချိန်း နောက်ဆုံးအချိန်အထိ သစ္စာစောင့်သိနေမည်ဖြစ်ပြီး ထိုရက် ကျော်လွန်သွားလျှင် တော့ တာဝန်မယူနိုင်ဟု ပြောလာသူ အဲန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် တယောက်နှစ်ယောက်လည်း ရှိသည်။ ထိုသူတွေ မှာ ဦးသုဝေတို့လို၊ ဒေါက်တာခင်ဇော်ဝင်းတို့လို ရိုးသားမှုမရှိသော အခွင့်အရေးသမားများသာ ဖြစ်၏။
စစ်အုပ်စု၏ ဆင်ကွက်ထဲသို့ မ၀င်ဘဲ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံ၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျောခိုင်း လျက် ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အဲန်အယ်လ်ဒီပါတီအား လူထုက နှစ်သက်အား ရ ကျေးဇူးတင်စွာ ထောက်ခံနေကြချိန်တွင် ကိုယ့်သိက္ခာကိုယ် မစောင့်စည်းနိုင်သော အသားထဲက လောက်များ ပေါ်ထွက် လာခြင်းမှာ လူထုအကျိုးပြု လူမှုလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သော အဲန်အယ်လ်ဒီကို ပို၍ သန့်စင်သွားစေ မည် ဖြစ်သည်။
မည်သည့်တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုကိုမျှ ကိုယ်စားမပြုဘဲ စစ်အုပ်စုအကြိုက် အဓမ္မ ရေးဆွဲထားသည့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အ ခြေခံဥပဒေအား အကောင်အထည်ဖော်မည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတစွာ ကျင်းပမည်ဆိုသည့်တိုင် လက်ခံနိုင်စရာ လုံးဝ မရှိကြောင်း လူထုအတော်များများက နားလည်လာကြပြီ ဖြစ်သည်။ လက်မခံရုံသက်သက်ဖြင့် ရပ်တန့်မ နေဘဲ ထိုအခြေခံဥပဒေနှင့်အတူ စစ်အုပ်စုတစုလုံး ပပျောက်သွားအောင် ကြိုးပမ်းကြမည့်သူတွေလည်း ဟိုတကွက် ဒီတကွက် ရှိလာနေပြီ ဖြစ်၏။
ဒီကေဘီအေထဲမှ တပ်မှူးများမှာ ရန်သူတွန်းအားပေးသည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးအပေါ် သဘောထားကွဲမှုများ ရှိလာ သည်။ အချို့က မိမိတို့ မလိမ့်တပတ် ကျွန်ပြုခံရမည့်အဖြစ်ကို သိမြင်လာပြီး လက်မခံနိုင်ဟု ငြင်းဆိုလာကြကြောင်း ကြားသိရ သည်။ ကေအဲန်ယူ ကေအဲန်အယ်လ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဌေးမောင်သည်လည်း နအဖ၏ အစီအစဉ် ကို လက်မခံ ဆန့်ကျင်ကာ ထို့ကော်ကိုးမှနေ၍ နယ်စပ် မယ်လစခန်းအနီးသို့ ပြောင်းရွေ့လာခဲ့ကြောင်း ကြားသိရသည်။ မိမိတို့ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် ရည်မှန်းချက်များ ဖျောက်ဖျက်ခံရပြီး ရန်သူ၏ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှု အမျိုးမျိုးအောက် ထားရာနေ၊ စေရာသွား၊ ခိုင်းတာလုပ်ရမည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ်ကို မွန်ကလည်း လက်မခံ၊ မိုင်းလား၊ ၀ နှင့် ကချင်တို့ကလည်း လက်မခံကြ။ ရှမ်းကတော့ ခွဲထွက်သူအချို့ရှိလာသည့်တိုင် ရန်သူကို ရင်ဆိုင်ရန် အင်အားကောင်းစွာ ဖြင့် အသင့်ပြင်ဆင်ထားနေပြီ ဖြစ်သည်။
ကိုလိုနီခေတ်က အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး “ဘူး”အသင်းများ ပေါ်ခဲ့သလိုမျိုး၊ ပြီးခဲ့သော မဲဆောက်သင်္ကြန်၌ ဗမာပြည်စစ်အုပ်စု၏ အစီအစဉ်များကို ငြင်းပယ်သည့် “ဘူး” သင်္ကြန်သံချပ်ပြိုင်ပွဲများကို ကျင်းပခဲ့ကြောင်း ကြားသိရသည်။ ဘူး လှုပ်ရှားမှုဟူ၍ လည်း ပေါ်ပေါက်လာသည်။ လူထုတိုက်ပွဲကော်မတီဟူ၍ ဖွဲ့စည်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၀င်အများစု၏ သဘောထားကို ထင်ဟပ်ဖော်ပြထားသည့် ကြွေးကြော်သံများ ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံဘူး၊ ပါတီမှတ်ပုံမတင်ဘူး၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မ၀င်ဘူး၊ မတရားတဲ့အမိန့်တွေကို လက်မခံဘူး စသဖြင့် ပိုစတာ ပုံစံ ရေးထားသော နှိုးဆော်စာကို တွေ့ရသည်။ ဗမာပြည်ထဲ အချို့မြို့ရွာများ၌ ပိုစတာများလိုက်ကပ်သည့် သတင်းကိုလည်း ကြားရသည်။ စစ်အုပ်စုအား ဤကဲ့သို့ “ဘူး”ခံ ငြင်းပယ်၊ ဆန္ဒပြနေမှုများမှာ မကြာမီ တိုင်းပြည်နှင့်တ၀ှမ်း တညီတညွှတ်တည်း စတင်ပေါ်ပေါက်လာတော့မည့် ထိရောက်ပီပြင်သော လှုပ်ရှားမှုများ၏ ရှေ့ပြေးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် လူထုတိုက်ပွဲ ဖော်ဆောင်မည့် အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုင်းပြည်အတွင်း သွေးထွက်သံယိုများဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်း လဲခြင်းမျိုး၊ လူထုနစ်နာမည့် အဖြစ်မျိုးများကို စိုးရိမ်ကြောက်လန့်ကာ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်မှာ ခေတ်မရှိတော့ကြောင်း ပြောဆို ကန့်ကွက်နေကြသော ပညာရှိအရေခြုံ ငကြောက်တွေ အတော်ပင်ရှိနေသလို၊ လူထုဘက်သား တပ်မှူးတွေ၊ အရာရှိအရာခံ အကြပ်တပ်သားတွေကိုယ်တိုင်က ပြောင်းလဲပြီး အာဏာရှင်ကို တော်လှန်ဖြုတ်ချမှသာ ဖြစ်နိုင်မည်ဟု ဆိုသူတွေလည်း ရှိနေ သည်။
အကြမ်းဖက်သူကို အကြမ်းဖက်၍ တိုက်ပွဲဝင်လျှင် တဘက်ကလည်း ပိုမို၍ အကြမ်းဖက်ခြင်းဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုများ မပြီးနိုင် မစီးနိုင် ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟု ဆိုသူကဆို၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ပွဲဖြင့် ဒီမိုကရေစီကို မရနိုင်ဟု ပြောသူတွေပြော၊ လူထုအတွက် ကိုယ် ကျိုးစွန့် တိုက်ပွဲဝင်မည့်သူများကို အားပေးကူညီမှုမပြုဘဲ ကိုယ့်ကျိုးငဲ့ ကြောက်ရွံ့စိတ်များဖြင့် အတွေးအခေါ်တွေ တိမ်းစောင်း နေကြသည်။
တကယ်တော့ စစ်အာဏာရှင်အား အကြမ်းဖက် တော်လှန်သည်မှာ ဒီမိုကရေစီရရှိရန်မဟုတ်။ စစ်အာဏာရှင်နှင့် ၎င်းတို့၏ လက်ငုတ်များကို အမြစ်မကျန် ဖြိုဖျက်ရန်သာ ဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်ထံမှ ဒီမိုကရေစီကှို တောင်းရန်မလို။ မည်သည့်စစ် အာဏာရှင်ကမျှ ဒီမိုကရေစီကိုမပေး။ ပေးရန်လည်း ၎င်းတို့မှာမရှိ။ ဒီမိုကရေစီမှာ လူထုအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်၍ စစ်အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ချပြီးနောက်ပိုင်း လူထုက ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်ယူရမည့်ကိစ္စ ဖြစ်သည်။
စစ်၏ ဆိုးကျိုးများ၊ အနိဌာရုံများကို ကြောက်လန့်ပြီး စစ်ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်နေလျှင် စစ်ကျွန်များအဖြစ် ဖိနှိပ်စော်ကား အနိုင် ကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရမှုများနှင့် ပို၍ကြုံရဖို့သာ ရှိလေသည်။
ဗမာပြည်စစ်အုပ်စုအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး စေ့စပ်ညှိနှိုင်း အဖြေရှာ၍ ရနိုင်မည်ဟု ထင်နေကြသူများအနေဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ဒီမိုကရေစီရေး တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူများ၊ နှစ်ပေါင်း ၆၀ကျော် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ အတွင်း နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းအရ ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသူများ၏ အတွေ့အကြုံတွေကို မေ့ထားဖို့ရန် မသင့်။
ရန်သူစစ်အုပ်စုအား အကြမ်းနည်းသုံး၍ မတိုက်ခိုက်နိုင်လျှင် တိုင်းပြည် ဘယ်သောအခါမျှ မလွတ်မြောက်၊ မငြိမ်းချမ်းနိုင်။
နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို လက်ခံထားသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆရာကြီးဦးဝင်းတင် အပါအ၀င် အဲန်အယ်လ်ဒီပါတီ အနေဖြင့်မှု အကြမ်းနည်းသုံးပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ရန် ဘယ်သောအခါမျှ ဦးဆောင် နှိုးဆော်လိမ့်မည်မဟုတ်။ အကောင်းဆုံးကို မျှော် လင့်သလို အဆိုးဆုံးအတွက် ပြင်ဆင်ထားပါ ဆိုသောစကားနှင့် ထွက်ပေါက်ပိတ်နေတာကို ဖောက်ထွက်ဖို့ ပြောဆိုမှုများကို မိမိတို့က နားလည်ကြရမည် ဖြစ်သည်။ မိမိတို့လူထု၏ တော်လှန်ပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းမှုများကိုလည်း အဲန်အယ်လ်ဒီက နား လည်ပေးနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
ယခုအခြေအနေတွင် ရန်သူသည် အရူးမီးဝိုင်း အနေအထားသို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်၏။ အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များကို နယ် ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေး အဓမ္မ ဖိအားပေးနေသော်လည်း တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က မလိုက်နာဘဲ ပြန်လည်တိုက်ပွဲ ၀င်ကြတော့မည် ပြဿနာ၊ မြို့ကြီးအချို့မှ လုပ်ခလစာ လူနေမှုစရိတ် မမျှတကြသော အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြသည့် ပြဿ နာ၊ ၎င်းတို့လုပ်ရပ်များအတွက် အတိုက်အခံများနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများက စွဲချက်တင် ဖိအားပေးလာသည့် ပြဿနာ၊ အစရှိ သော ပြဿနာရပ်တွေ မျိုးစုံ ရှိနေသည်။
စစ်အုပ်စုသည် မည်သည့် ပြဿနာတခုကိုမျှ ပြေလည်အောင် မရှင်းနိုင်။ ဗမာပြည်တွင်း တနေရာရာမှာ တိုက်ပွဲတွေ စပြီဆို သည်နှင့် ယခင်ကလို မဟုတ်တော့ဘဲ စစ်ရေးမဟာမိတ်ချင်းကူညီကြရန် တိုင်းရင်းသားများဘက်က ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်နေ သည်။ ကြွေးတင်ကျွန်ဖြစ် ဘ၀ပျက်နေကြသည့် အလုပ်သမား၊ လယ်သမား လူထုကလည်း အုံကြွတော်လှန်ကြတော့မည့်ဆဲ ဆဲ အခြေအနေ ရှိနေသည်။
အခွင့်အရေးသမားတွေက စစ်အုပ်စုလုပ်သမျှ ထောက်ခံကာ ၀င်ရောက်အမြတ်ထုတ်ရန် ပြင်ဆင်နေသော်လည်း တိုင်းရင်း သားပြည်သူအများစုက စစ်အုပ်စုကို မထောက်ခံ။ ထို့အပြင်လည်း စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေချင်း တယောက်ကိုတယောက် မယုံကြည်မှုများဖြင့် သတိထားနေကြရပြီး တပ်တွင်းလုပ်ကြံမှုတွေ ပေါ်လာမည့်အရေးကို ကြောက်နေကြရသည်။ ပြီးခဲ့သော ရန်ကုန်သင်္ကြန်ဗုံးမှာ ကမ္ဘာအေးလှိုဏ်ဂူအနီး ဗုံးခွဲမှု၊ ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးအိမ် ဗုံးခွဲမှု၊ ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးနှင့် သူရစစ်မောင်တို့ အပါအ ၀င် အရာရှိများ ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျ သေဆုံးမှု စသည့် ၎င်းတို့ချင်း အတွင်းကြိတ်လုပ်ကြံမှုများ၏ အဆက် ဖြစ်၏။
တပ်မတော်အတွင်း စစ်အုပ်စုဝင်အချင်းချင်း စားကျက်လုမှုများ၊ လူထုဘက်သားနှင့် စစ်အုပ်စုဘက်သားများ တစုနှင့်တစု စောင့်ကြည့်မှုများ မည်သို့ပင် ရှိနေစေကာမူ လူထုဘက်က တစုံတရာ စတင်ဆောင်ရွက်မှု မပြုလာဘဲနှင့် မည်သည့်တပ်ကမျှ တပ်တွင်း အာဏာသိမ်းမှု၊ အာဏာရှင်၏ လက်ကိုင်တုတ်အုပ်စုနှင့် လူထုဘက်သားအုပ်စုတို့အကြား တိုက်ပွဲများ လုပ်ဆောင် လာနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ လူထု၏ ထောက်ပံ့ကူညီမှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများကို လူထုဘက်သားတပ်တွေက လိုအပ်သည်။ သို့ မှသာ လူထုထဲက မွေးဖွားလာသည့် လူထုတပ်များအနေဖြင့် တပ်အချင်းချင်း အတွင်းသိလည်းဖြစ်၊ လူထုကလည်း သိထား ပြီးဖြစ်သည့် မိမိတို့အပေါ် ဖိနှိပ်မှု၊ အဓမ္မမှု အမျိုးမျိုး ကျူးလွန်သော ခေါင်းဆောင်အဆင့်ဆင့်ကို ဖြုတ်ချနိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပဖို့ရန် စီစဉ်နေသည့် ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတပြီး သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံး ပါဝင်နိုင်အောင် ဖန်တီး ပေးရန် အာဆီယံခေါင်းဆောင်များနှင့် ကမ္ဘာ့တိုင်းပြည်အသီးသီးက စစ်အစိုးရအား တောင်းဆိုနေချိန်တွင် အမေရိကန် ပြည် ထောင်စု၊ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ရီပတ်ဘလစ်ကင်ပါတီမှ အောက်လွှတ်တော်အမတ် ဒေနာရိုရတာကာ (Dana Rohra-bachar) က ကွန်ကရက်တွင် လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီပြီး အလွန်ပင် တန်ဖိုးရှိသော စကားများကို ပြောကြားလိုက်လေ သည်။
ဗမာပြည်သားများမှာ ဗမာပြည်၏ အချုပ်အခြာအာဏာ တိုင်းတပါးလက်ထဲ ရောက်တော့မည့်အဖြစ်မျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရ ကြောင်း၊ တရုတ်ပြည်သည် ဗမာပြည် သယံဇာတတွေကို ခိုးယူနေရုံမက ၎င်းတို့၏ လက်အောက်ခံ နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ရန် ဗမာ ပြည် ပြည်လူလုထုလက်ထဲမှာ တဖြည်းဖြည်း လုယူနေကြောင်း၊ တိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာစောင့်သိဖို့ထက် မိမိအာဏာတည်မြဲ ရေးကိုသာ ဦးစားပေးနေကြသော မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တို့၏ ကူညီမှုဖြင့် မတရားသဖြင့် လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်လိုစိတ် ရှိသူများ တိုင်းတပါးလက်အောက်ခံ ဖြစ်သွားမည့်ကိစ္စကို မလိုလားသူများအနေဖြင့် ဗမာပြည် ကို ကျွန်ဇာတ်သွင်းနေသည့် စစ်အာဏာရှင်အား တညီညွတ်တည်း တိုက်ထုတ်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းပြည်ကို ဆယ်စုနှစ် ပေါင်းများစွာ တင်းကြပ်စွာ အုပ်ချုပ်လာခဲ့သူများအား တိုက်ထုတ်ရန်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများ၊ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနှင့် အခြားသော မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ် ကြောင်း မျိုးချစ်စိတ်ရှိသော တပ်မတော်တွင်းက အရာရှိအရာခံ အကြပ်တပ်သားတွေပါ ပြည်သူလူထုနှင့် ပူးပေါင်းလျက် စစ် ခေါင်းဆောင်တွေကို ပုန်ကန်တိုက်ခိုက်ရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်း၊ အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေကလည်း ဂုဏ်သရေပြည့်ဝပြီး ပြည်သူနှင့် တိုင်းပြည်အကျိုးကို ရှေးရှုသည့် စည်းကမ်းရှိသည့် တပ်မတော်ကို ထူထောင်လိုကြသော တပ်မတော်အတွင်းမှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ကြဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ စိတ်ထားစေတနာ မှန်ကန်သော တပ်မတော်အတွင်းမှ ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်လည်း အမှန်တကယ် လွတ်လပ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ဗမာနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်လာရေး စစ်အာဏာ ရှင်ကို တော်လှန်ပုန်ကန်ကြဖို့ အချိန်ကောင်း အခါကောင်း ကျရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဤအခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံး မခံကြဖို့နှင့် ကမ္ဘာ့မိသားစုများကလည်း ဗမာပြည်သားတို့၏ တော်လှန်ရေးကို အားပေးထောက်ခံကြမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သွားသည်။
တရားမျှတမှုမရှိသည့်အပြင် ဗမာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ခွင့်မရှိအောင် တမင်လုပ်ကြံရေးဆွဲ ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် စစ်အုပ်စုအပေါ် ပိုမိုပြင်းထန်သည့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု များ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရန်လည်း အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ၉ယောက်က သမတ အိုဘားမားထံ စာရေး တောင်းဆိုခဲ့ကြကြောင်းလည်း ကြားသိရသည်။
ကမ္ဘာသည် ဗမာ့အရေးအတွက် စိတ်ပူစွာ ကူညီဆောင်ရွက်နေခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်၏။ ဗမာပြည်သားလူထုကြီး၏ တာဝန်သာ ကျန်ရှိပေတော့သည်။
တချိန်က အမေရိကန်သမတဖြစ်သော ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီက “ဖြစ်နိုင်ချေမရှိသော ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ် ဆောင်သူများမှာ အကြမ်းနည်းဖြင့် တော်လှန်ပြောင်းလဲရေးကို မလွဲမရှောင်သာ လုပ်ရတော့မည်ဖြစ်သည်”ဟု ဆိုသည်။
တိုင်းပြည်ကို ထောက်ထားညှာတာမှုကင်းမဲ့စွာ အကြမ်းဖက်အုပ်ချုပ်နေသော စစ်အုပ်စုအား အကြမ်းနည်းကို သုံးပြီး ဖယ်ရှား ခြင်းသာလျှင် စစ်ကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ရေး တခုတည်းသော လမ်းကြောင်း ဖြစ်လေသည်။
ဗမာပြည် စစ်ကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆုတောင်း၍ မရ၊ စီတန်းလှည့်လည် မေတ္တာပို့၍ မရ။ မည်သည့်ဘုရားက မျှလည်း လူကိုမကယ်နိုင်။ လူကိုလူကသာ ကယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အတ္တာဟိ အတ္ထနော နာထော မိမိအစွမ်းကို မိမိယုံကြည် ကိုးစားကြရမည် ဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင် အုပ်စုဟူသော လူနည်းစုကလေးကို တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကြီးနှင့် လူထု ဘက်သား တပ်မတော်သားများ ပါဝင်သော လူများစုကြီးက ဘာ့ကြောင့် မတွန်းလှန် မဖယ်ရှားနိုင်ကြမည်နည်း။ မတရားလုပ် သူက တရားမျှတရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေသူများအား မတရားသင်းများအဖြစ် ကြေညာမည်ကို အဘယ့်ကြောင့် မှုကြရမည် နည်း။
တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအနေဖြင့် အသက် (၈၀)ပြည့်မြောက်သောမွေးနေ့တွင် ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေကာ ပြည်သူလူထုသို့ စကားသ၀ဏ်လွှာပါးခဲ့သော ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၏ စကားအတိုင်း ယခုလို အချိန်မျိုးတွင် လက်နက် (၃)မျိုး ကို ကိုင်စွဲရတော့မည် ဖြစ်သည်။
မကြောက်တရားလက်နက်။ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ၎င်းတို့တပ်များကို အနည်းငယ်မျှ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စရာ မလို။ ၎င်းတို့ ခိုင်းစေသမျှ လိုက်လုပ်ကြသော လက်ပါးစေတပ်များထဲတွင် သူခိုး၊ ဓားပြ မုဒိန်းတန္တများ၊ အလုပ်မရှိ၊ အကိုင်မရှိ၊ ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စား၊ အချောင်သမားများ၊ အတင်းအဓမ္မအကြပ်ကိုင်ကာ တပ်ထဲဆွဲသွင်းခံရသူများ၊ လိမ်ညာလှည့်ဖြား ခြိမ်းခြောက်ခံရ ကာ တပ်ထဲရောက်လာခဲ့သော ကလေးစစ်သားများနှင့် အထက်ဖား အောက်ဖိ လုပ်တတ်သည့် ကိုယ်ကျိုးငဲ့ အခွင့်အရေး သမားများသာ ရှိသည်။ ၎င်းတို့၌ ရုရှ၊ တရုတ်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့မှ ၀ယ်ယူထားသော လက်နက်အချို့ရှိနေသော်လည်း လူထုအုံကြွမှုကို တွန်းလှန်နိုင်မည်မဟုတ်။ မကြာမတင်ပင် ထိုလက်နက်များမှာ လူထုဘက်သားတို့၏ လက်နက်များ ဖြစ်လာရ ပေလိမ့်မည်။
သွေးစည်းညီညွတ်ရေးလက်နက်။ ဘုံရန်သူကို တိုက်ခိုက်ရေး ဦးတည်ချက်အောက်၌ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲ့အစည်းများ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှ ရုန်းထွက်လိုသော မျိုးချစ်တပ်မတော်သားများနှင့် ပြည်သူလူထုများ၊ အားလုံး ပင် သွေးစည်းညီညွတ်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ အချို့သော ပါတီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အချို့သော လူမျိုးစု အဖွဲ့အစည်းဝင် တို့၏ ကိုယ်ကျိုးရှာ မသမာမှုများ၊ အချင်းချင်း အဝေမတည့်မှုများ၊ ဆရာမွေး တပည့်မွေး၊ ဂိုဏ်းခွဲကာ တဦးနှင့်တဦး ပုတ်ခတ် စော်ကားမှုများအားလုံး ရပ်တန်းကရပ်ပြီး၊ ဘုံရန်သူကို ဆန့်ကျင်ရေးတွင် မိမိတို့ ကျွမ်းကျင်ရာ ကဏ္ဍအသီးသီးမှ တညီတ ညွတ်တည်း ပါဝင်ရမည် ဖြစ်သည်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တခုတည်း ချမှတ် ရှေးရှု ရင်ဆိုင်ချီတက်ရေး လက်နက်။ စစ်အာဏာ ရှင်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရန်အတွက် မည်သို့မျှ လမ်းလွဲတွေဝေနေစရာ မရှိ။ စစ်အာဏာရှင်ကို တိုက်မည်ဟူသည့် ဆုံးဖြတ် ချက်ကို ပီပြင်စွာ ချမှတ်လျက်၊ စစ်အာဏာရှင် ပြိုပျက်ရေးကို ရှေးရှုကာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရန် ဘက်ပေါင်းစုံမှ တညီတ ညွှတ်တည်း ပါဝင်ချီတက် တိုက်ခိုက်ကြရမည် ဖြစ်သည်။
လူထုအနေဖြင့် စစ်အုပ်စုအား ဖြုတ်ချရေး တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် သတိထားရမည့်အချက်များ ရှိသည်။ ၈လေးလုံးတုန်းက အတွေ့ အကြုံရရှိခဲ့သူများက လူငယ်လူရွယ်များကို ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ကိစ္စရပ်များ သတိပေး နှိုးဆော်နိုင်သည်။ ရန်သူစစ်အုပ်စုက သူ့လူကိုယ့်လူ အရောရော အထွေးထွေး ဖြစ်အောင် သပ်လျှိုမှုများနှင့် တောမီးလောင် တောကြောင် လက်ခမောင်းခတ်ကြ မည့် သူခိုး၊ ဓားပြ အန္တရာယ်များကိုလည်း ကာကွယ်ဖို့ရန် လိုအပ်သည်။ လူထုတရပ်လုံး ကျီးလန့်စာစားအဖြစ်မျိုး မရောက်စေ ၇န် အစီအစဉ်တကျ လုပ်ရမည် ဖြစ်၏။ ရန်သူ၏ သပ်လျှိုထိုးခွဲမှုကြောင့် ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ၊ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများအဖြစ် အသွင်ပြောင်းသွားတာမျိုး မဖြစ်စေဘဲ စစ်အုပ်စုပြုတ်ကျရေး ဦးတည်တိုက်ခိုက်သည့် လူထုတိုက်ပွဲကို ပီပြင်စွာ ဖော်ဆောင်ရ မည် ဖြစ်သည်။
တော်လှန်ရေး လှေငယ်ကလေးမှာ စစ်အာဏာရှင် တိုက်ပွဲပင်လယ်ပြင်ကို အောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ အားယူပြင်ဆင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဦးတည်တိုက်ခိုက်နေသည့် မုန်တိုင်းကြမ်းထဲ ရန်သူ့သပ်လျှိုထိုးခွဲမှု ရေလှိုင်းအောက်သို့ လှေငယ်ကလေး ရောက်မသွားစေဖို့တော့ ဂရုပြုကြရမည် ဖြစ်လေသည်။
No man who is not willing to bear arms and to fight for
his rights can giveagood reason why he should be entitled
to the privilege of living inafree community.
“လက်နက်ကို သယ်ပိုးပြီး သူ့အခွင့်အရေးအတွက် သူတိုက်ဖို့ ဆန္ဒမရှိသူဟာ လွတ်လပ်တဲ့ လူစုအတွင်း နေထိုင်ရတဲ့ ထူးခြားတဲ့ အခွင့်အရေးကို ဘာ့ကြောင့် သူ ရသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကောင်းတခု ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး”ဟု တချိန် က အမေရိကန် သမတတဦးပင်ဖြစ်သော သီယိုဒိုရုစဘဲ့က ဆိုခဲ့သည်။
ဗမာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေး ဗမာပြည်သားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိနေသည်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို စစ်ကျွန်ဘ၀မှ ကယ်တင်နိုင် ရေး မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူတိုင်း၊ သူရဲဘောကြောင်စွာ မျက်နှာလွဲ ပုန်းရှောင်ထွက်ပြေးရမည်ကို ရှက်တတ်သူတိုင်း၊ အခြားနိုင်ငံများ နည်းတူ လူချင်းတူတူ သူချင်းမျှမျှ မိသားစုဘ၀ လွတ်လပ်အေးချမ်းလုံခြုံစွာ၊ ကမ္ဘာ့အလယ် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ရပ်တည်လိုသူ တိုင်း ဗမာပြည် ကယ်တင်ရေး လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲကို မဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖော်ရပေတော့မည်။
/ 5/07/2010 08:05:00 AM / Comments: (0)
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်တပ်မတော် DKBA ၏ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် အချို့ကြားတွင် နယ်ခြား စောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးအပါ် သဘောထားကွဲလွဲမှုများဖြစ်နေကြောင်း တပ်မှူးများက ဝန်ခံပြောကြားသည်။
အင်အား ၇ဝဝဝ အနည်းဆုံးရှိသော DKBA အင်အားကို စစ်အစိုးရက ၁ဝဝဝ အထိလျော့ချခိုင်းခံနေရစဉ် သဘောကွဲမှုမှာ လူသိရှင်ကြားဖြစ်လာသည်။
“အရင်က DKBA တံဆိပ်၊ DKBA အလံနဲ့နေပြီး အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလည်း ဒီအပေါ်မှာ လုပ်နေပြီး၊ အဲဒါတွေအားလုံး ရုပ်သိမ်းခံလိုက်ရပြီးတော့.. စစ်တပ်အောက်မှာ မနေချင်ဘူး ဆိုတာမျိုးတွေ ရှိနေတာပေါ့” တပ်မဟာ ၉၉၉ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းမှူးတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
DKBA တွင် အဓိက စစ်အင်အားအဖြစ် တပ်မဟာ ၃ ခုရှိပြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်ကြည် ဦးဆောင်သော ၃၃၃၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် ပြားပြား ဦးဆောင်သည့် ၅၅၅၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဖားနွီး ဦးဆောင်သည့် ၉၉၉ တို့ဖြစ်ပြီး အမာခံအင်အား ၇ဝဝဝ ကျော်ရှိ်ရှိမည်ဟု လေ့လာသူများက ခန့်မှန်းထားကြသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းရန်ကို ဥက္ကဌ ဦးသာထူးကျော်က သဘောတူသော်လည်း တပ်မှူးအချို့က မလိုက်နာလိုကြပေ။ သို့သော်လည်း သဘောမတူသောဘက်က အင်အားမည်မျှရှိသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။
ဝေဖန်သူများကမူ အပစ်ခတ်ရပ်စဲပြီးနောက် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများရနေသော DKBA အနေဖြင့် စစ်အစိုးရကို တင်းတင်းမာမာငြင်းဆန်ရန် ခဲယဉ်းသည်ဟု ပြောသည်။
ယခင်လကုန်ပိုင်းက DKBA ဌာနချုပ်ရှိရာ မြိုင်ကြီးငူ၌ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ဒုတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်း ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့နှင့် DKBA ခေါင်းဆောင်အချို့ ဆွေးနွေးကြရာ DKBA တပ်မင်းအချို့ မတက်ရောက်ဘဲ ရှောင်နေခဲ့သည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းလျင် DKBA ကို အင်အား ၁ဝဝဝ ကျော်အထိလျော့ချရန် စစ်အစိုးရကညွှန်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးတွင်လည်း သဘောတူမှုမရဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် DKBA တပ်သားတချို့ KNU ကြီးစိုးရာ နယ်မြေအချို့တွင် အရပ်သားအဖြစ် ပြောင်းလဲနေထိုင်ကြသည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်လာသည်။
ရန်ဘက် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး စောလှငွေက မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနှင့် မပတ်သက်သူ၊ KNU ၏ ဦးဆောင်မှုကို ခံယူနိုင်သူဖြစ်လျှင် လက်ခံမည်ဟု ပြောသည်။
ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေသော KNU မှ ခွဲထွက်ကာ ၁၉၉၄ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စစ်အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့သော DKBA မှာ ယခင် KNU ထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေအချို့ကို ထိန်းချုပ်ခွင့်နှင့်အတူ သစ်လုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အခွန်အတုတ် ကောက်ပိုင်ခွင့်တို့ ရရှိသည်။ ထို့အပြင် တပ်အချို့က မက်သာဖီသမင်း စိတ်ကြွဆေးပြား ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နာမည်ဆိုး ထွက်သည်။
မယ်လစခန်း၌ စိတ်ကြွဆေးပြား (၅၀)ကျော် ဖမ်းဆီးရမိ
/ 5/06/2010 07:26:00 PM / Comments: (0)
မေလ ၆ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မယ်လဒုက္ခသည်စခန်း၌ စိတ်ကြွစေသည့် မူးယစ်ဆေးပြား(မြင်းဆေး) ၅၀ကျော်ကို စခန်းဆိုင်ရာ ထိုင်း အာဏာပိုင်များ(အော်ဆော်)က ရောင်းဝယ်သုံးစွဲသူ ၃ဦး၏လက်ဝယ် ယမန်နေ့မနက်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟု ကေအိုင်စီက စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မယ်လစခန်း လုံခြုံရေးတာဝန်ခံ စောအားမူက “မနေ့ မနက် ၆း၀၀နာရီလောက်မှာ (အော်ဆော်)ကိုယ်တိုင် ၀င်ဖမ်းတယ်။ ဆေး ပြား (၅၆)ပြားနဲ့အတူ ဇုံဘီ ရပ်ကွက်(၄)မှာ သုံးတဲ့ကော၊ ရောင်းတဲ့သူပါ သုံးယောက်ကို လက်ပူးလက်ကြပ် ဖမ်းဆီးရမိတယ်။ ရောင်းသူက အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး အခု သက်ဆိုင်ရာကို ပို့လိုက်ပြီ”ဟု အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ စိတ်ကြွဆေးပြားရောင်းသူများသည် မြ၀တီမှတဆင့် ဆက်သွယ်၍ မယ်လစခန်းအတွင်းသို့ သယ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ် ကြောင်း စောအားမူက ဆက်ပြောသည်။
“သူတို့တွေ (ဆေးပြားရောင်းသူ) ပြောပြတဲ့ပုံအရဆိုရင် မြ၀တီက လာပို့ပေးတဲ့လူရှိတယ်။ လာပို့တဲ့လူက စခန်းထဲကို မ၀င်ခင် ထိုင်းစစ်တပ်ဂိတ်မှာ အဖမ်းခံရတော့ အဲဒီကနေတဆင့် ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေအထောက်ထားနဲ့တကွ ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးတာ ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ စခန်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့တောင် မသိလိုက်ဘူး”ဟု ပြောသည်။
မြ၀တီမြို့ခံတဦးက “ခင်ဗျား မြင်းဆေးဘယ်လောက်လိုချင်လဲ။ ပိုက်ဆံရှိရင် တပုံကြီးရှိတယ်။ တပြားမှ မြန်မာငွေ (၉၀၀)ထဲပဲ။ ဒါက ကိုယ့်အချိတ်ဆက်နဲ့ကိုယ်မှ။ ၀ယ်နေကျ မဟုတ်ရင် တပြားကို တထောင်ကျော်တယ်။ ထိုင်းဘက်ကလူတွေ အမြဲတမ်း လာဝယ်ကြတယ်”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
ယခုအမှုသည် ကြီးမားသည့် ပြစ်မှုဖြစ်သောကြောင့် အနည်းဆုံး (၆)နှစ် ထောင်ကျခံရမည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ထောင်မှ ပြန် လည် လွတ်မြောက်လာသည့်တိုင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်း၌ ဆက်လက် နေထိုင်ခွင့်ပြုမပြုကိုပင် အလွန်စဉ်းစားရမည်ဖြစ် ကြောင်း စခန်းဥက္ကဌ စောထွန်းထွန်းက ပြောသည်။
မဲဆောက်မြို့၏မြောက်ဘက် (၄၀)ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိ လူဦးရေ ၅သောင်းခန့် နေထိုင်သော မယ်လကရင်ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် ယခင်က ဘိန်းနှင့် ဆေးခြောက် အနည်းအကျဉ်းကို စခန်းလုံခြုံရေးများက မကြာခဏ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သော်လည်း ယခု လို စိတ်ကြွဆေးပြား ဖမ်းဆီးရမိခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်ပင်ဖြစ်သည်။
18-year-old Arakan Woman Raped by Burma Army Captain
/ 5/06/2010 04:25:00 PM / Comments: (0)
နအဖ စစ်ခွေးများ၏ယုတ်မာပက်စက်မှုတွေကတော့ ပြိုင်စံရှားပါပဲ...လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတာလုံးဝလုံးဝမရှိ တော့တဲ့ကောင်တွေ.....အသေးစိတ်သတင်းကိုအောက်ကFBR report မှာဆက်လက်ဖတ်ရှု့ပါတော့...
freeburmarangers Reports 20100505
မြန်မာစစ်အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိတည်ရေး လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် သတိပေး
/ 5/06/2010 03:54:00 PM / Comments: (0)
မြန်မာစစ်အစိုးရ အနေနဲ့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိကို တည်ဖို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးပြီး အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပါဝင်တဲ့၊ အများလက်ခံ ယုံကြည်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမျိုး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့ ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးမှူး သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား (Thomas Ojea Quintana) က မေလ ၅ ရက်နေ့မှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရ ကျင်းပဖို့ ပြင်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲတွေလိုမျိုး လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားတဲ့ စံနှုန်းတွေ ရှိဖို့ လိုတယ်လို့လည်း သူက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို ဒီနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ လာရောက် စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ မစ္စတာ ကင်တားနားက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီနှစ်ထဲ ကျင်းပဖို့ ပြင်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အများယုံကြည် လက်ခံတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖန်တီးပေးဖို့ ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အတွက် မှတ်ပုံတင်ဖို့ နောက်ဆုံးရက်ဟာ မေလ ၇ ရက်နေ့ ဖြစ်ပြီး ကျင်းပမယ့်ရက်ကို မသတ်မှတ်ရသေးတဲ့၊ ဒီနှစ်ထဲ ကျင်းပဖို့ ပြင်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို အများက လက်ခံ ယုံကြည်လာဖို့ နိုင်ငံတကာရဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေ၊ အာဆီယံနဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ တောင်းဆိုမှု အားလုံးကို မြန်မာစစ်အစိုးရ အနေနဲ့ တုံ့ပြန် အဖြေပေးဖို့ အချိန်မနှောင်းသေးဘူးလို့ မစ္စတာ ကင်တားနားက ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် …
“အခု ကျင်းပဖို့ ပြင်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို အများက လက်ခံ ယုံကြည်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတခု ဖြစ်လာဖို့၊ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံ နေရသူတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ ကျနော် တောင်းဆိုပါတယ်။ ဒါမှလည်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့ ပါဝင်လာနိုင်မှာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်မပေးရင် သူတို့ရဲ့ ပါတီတွေ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားချက်တွေကို ပြန်ပြီး စဉ်းစားလာမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် ဒီလို ပါတီပေါင်းစုံ ပါဝင်မှသာ အများလက်ခံ ယုံကြည်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတခု ဖြစ်လာမှာပါ။”
အခုအချိန်ဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရအတွက် အချိန်ကောင်း အခါကောင်းဖြစ်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ပြသဖို့ လိုအပ်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာကပါ ပါဝင်ပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် မစ်ခ်ျ မက်ကောနဲလ် (Mitch McConnell) ဦးဆောင်တဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိသာတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ အခုထိ မတွေ့ရသေးတဲ့အတွက် ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေ ချမှတ်ဖို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပဲ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာစစ်အစိုးရ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေကိုရော ဒီဥပဒေအရ ကျင်းပဖို့ လုပ်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိုပါ အမေရိကန် အစိုးရက အသိအမှတ် မပြုဖို့လည်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံဘက်က အခုလို တောင်းဆိုရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ရောက်နေတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မစ္စတာ ကင်တားနားဘက်က ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲလို့ မေးကြည့်တော့…
“ကျနော့်အမြင်ကို ပြောရရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ကျနော်သွားခဲ့ရတဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း တွေ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအရ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ထားသလို သိသိသာသာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲလာတာမျိုး မတွေ့ရပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက ဆင်းရဲတဲ့ ပြည်သူတွေမှာ ထင်ဟပ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီပြည်သူတွေရဲ့ လက်ခံမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ လိုအပ်ချက်တွေကို ကျနော်တို့ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမှာပါ။”
မကျင်းပသေးတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြီး ဘာမှ မပြောချင်ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်တယောက် အနေနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ကြေညာခဲ့သလို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတခု ဖြစ်အောင် ကျင်းပပေးဖို့ တောင်းဆိုတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်းတွေနဲ့အညီ ကျင်းပပေးရမှာဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တနိုင်ငံ အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ထုံးစံအတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု၊ လွတ်လပ်စွာ စုရုံးခွင့်တွေကို ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
“ဒီရွေးကောက်ပွဲကို မြန်မာစစ်အစိုးရက စီစဉ်ခဲ့တာပါ။ ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲမျိုး မဆို၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေထဲက ဘယ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမျိုးမဆို လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားတဲ့ စံနှုန်းတွေ ရှိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် အနေနဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့ အခြေအနေတွေ အားလုံးကို ကျနော်က အစီရင်ခံရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကို အများက လက်ခံစေချင်တယ် ဆိုရင် လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်း ပြည့်မီအောင် မြန်မာစစ်အစိုးရက ကြိုးစားဖို့ ကျနော် အကြံပေးချင်ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
/ 5/06/2010 12:11:00 PM / Comments: (0)
တောင်ပေါ်သား လူနည်းစုများကို ပေါ်တာ အဖြစ် နအဖ စစ်တပ်မှ ခိုင်းစေနေ
/ 5/06/2010 09:25:00 AM / Comments: (0)
“စစ်တပ်တွေက ရွာတွေကို အဖွဲ့လိုက် အထမ်းသမားတွေ အတင်း တောင်းပီး ခိုင်းစေနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရွာသားတွေ အနေနဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် မြောက်ပိုင်း တောင်ဘဇားဈေးက ရိက္ခာတွေကို ဒိုးတန်း တောင်ကို ဖြတ်ပြီး ၀ါးနက်ရုံစခန်းနဲ့ နဟုံးနဟန်း ရှေ့တန်း စခန်းတွေကို ပို့ပေးရပါတယ်။ ခရီးက အသွား အပြန်က ၂ ရက် ကြာပါတယ်။ တခါတခါ ပိုက်ဆံ တကျပ်မှ မရပါ။ တခါတခါ တလေကျတော့လည်း စစ်ဗိုလ်တွေက တယောက်ကို ၁၀၀ ကျပ် အဲသလိုမျိုးပေးတာ ရှိပါတယ်။ တနေ့လုပ်အားခ ကျပ် ၁၀၀၀ ရှိတဲ့ နေရာမှာ ကျပ် ၁၀၀ ရလို့ကတော့ ဘာမှ ထူးတာ မဟုတ်ပါဘူး။”
ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ကို နအဖ ပြန်လည်စည်းရုံး
/ 5/06/2010 09:08:00 AM / Comments: (0)
နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရန် လက်မခံသည့် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ကို နအဖစစ်အစိုးရက စစ်ရေးနည်းဖြင့် အရေးမယူသေးဘဲ အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် စည်းရုံးလျက်ရှိသည်။
သတ်မှတ်ရက် နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သည့် ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီ (၂၈) ရက်တွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည့် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ကို နအဖတပ်များက အင်အားပြခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ယခုတဖန် ပြန်လည်စည်းရုံးနေသည်ဟု ကေအန်ယူ-ကေအန်အယ်လ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့မှ တပ်မှူးတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “သူတို့သတ်မှတ်တဲ့ အရင်လ (၂၈) ရက်နေ့က သူတို့တပ်တွေ စစ်အင်အားပြပြီးတော့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ လုပ်လာတဲ့အပေါ်မှာ ကျနော်တို့ဘက်က သတိထားရတာတွေရှိတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌ အဖိုးဌေးမောင်ဆိုရင် နယ်စပ်ဘက်ကိုပြန်နေရတဲ့ အနေအထားတွေရှိတယ်။ အခုသူတို့ဘက်က အကြောင်းကြားလာတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို အေးအေးဆေးဆေး ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။ ဘာပြဿနာမှ မရှိဘူးလို့လည်းပြောတယ်” ဟု ဆိုသည်။
စောဌေးမောင်အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ နယ်စပ်တွင် သွားရောက်နေထိုင်ခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိသည့်အတွက် ကော့ကရိတ်တွင်ရှိသည့် ထော့ကိုကိုး၌ ပြန်လာနေထိုင်ရန် နအဖက ခေါ်သော်လည်း အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌက ပြန်လာခြင်းမရှိဟု သိရသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းရန် သတ်မှတ်ရက်နောက်ဆုံးနေ့တွင် ထော့ကိုကိုးရှိဌာနချုပ်အနီးတွင် နအဖတပ်များအလုံးအရင်းဖြင့် စစ်ရေးပြခြိမ်းခြောက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့မှုများကြောင့် စောဌေးမောင်နှင့်အဖွဲ့သည် နယ်စပ်အနီး စခန်းဟောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နအဖတပ်များ၏ စစ်ရေးပြခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စောဌေးမောင်က နအဖစစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်ထံသို့ ဖုန်းဖြင့်မေးမြန်းရာ ၎င်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မသိရှိရကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်ဟု အဆိုပါတပ်မှူးက ပြောသည်။
ယခင်လကုန်ပိုင်းက နအဖဘက်မှ ပြေးဆွဲခွင့်ပိတ်ပင်ထားသည် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ပိုင် ကုန်တင်ကားများနှင့် ခရီးသည်တင်ကားများကိုလည်း ပြန်လည်ပြေးဆွဲခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ) အဖွဲ့၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၁) ဗိုလ်မှူးကြီးစော လှငွေက “နအဖက ခြောက်စားဟောက်စားလုပ်လို့မလာရင် အပျော့ဆွဲနဲ့လုပ်မယ်၊ မရရင်တော့ နောက်ဆုံး သားသတ်ရုံထဲသွင်းမှာပဲ။ ကရင်မှမဟုတ်ဘူး၊ အခြားအဖွဲ့တွေကိုလည်း ဒီနည်းနဲ့ပဲ လုပ်မှာသေချာတယ်” ဟု ပြောသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းခြင်းကို လက်မခံသည့် ဒီကေဘီအေတပ်မဟာ (၅) မှ တပ်မဟာမှူးနှင့်တပ် ဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း နအဖက စီးပွားရေးနှင့် အခြားမက်လုံးများပေး၍ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းမှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု ဒီကေဘီအေတပ်မှူးတဦးက ပြောသည်။
ကေအန်ယူ-ကေအန်အယ်လ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ကေအန်ယူမှ ခွဲထွက်ပြီး နအဖနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
/ 5/05/2010 06:56:00 PM / Comments: (0)
ကရင်ပြည်နယ်တခုလုံးတွင် နအဖစစ်တပ်မှ တပ်မ (၂၂)၊ (၄၄)နှင့် စစ်ကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ်-စကခ (၈)ခုမှ တပ်ရင်းပေါင်း တစ် ရာကျော် နေရာယူ လှုပ်ရှားလျှက်ရှိကြောင်း သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာနက ၎င်းတို့ရရှိသည့် စစ်ရေးအစီခံစာအရ ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
/ 5/05/2010 06:44:00 PM / Comments: (0)
/ 5/05/2010 10:12:00 AM / Comments: (0)
/ 5/04/2010 08:54:00 PM / Comments: (0)
ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ခွဲထွက်၍ နယ်စပ်သို့ထွက်ခွာ
/ 5/04/2010 08:38:00 PM / Comments: (0)
မဲဆောက် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဒီမိုကရက်တစ် ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာ တပ်မတော်(DKBA) တပ်ဖွဲ့ဝင် ရာပေါင်းများစွာသည် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် မဟာမိတ် ဖွဲ့ထားခြင်းကိုဖျက်ကာ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်သို့ ဦးတည်ထွက်ခွာနေကြပြီး တပ်မတော်က နောက်မှ ထက်ချပ်မကွာလိုက်နေသည်ဟု ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KNLA) သတင်း ရပ်ကွက်များက ပြောသည်။
‘ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပြန်လာနေသည်၊ သို့သော်တပ်မှူးများမပါ´ ဟု KNLA သတင်းရပ်ကွက် များက ယမန်နေ့ညက ပြောသည်။
မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော နအဖ ၏တောင်းဆိုချက်များအပေါ် ဒီကေဘီအေ စစ်သားအများအပြား မကျေမနပ်ဖြစ်ကြပြီး အချို့ဘက်ပြောင်းလာသည်ဟု မိမိတို့ကြားကြောင်း ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေးဗစ်တာကပေါ က ပြောသည်။
KNU အကြား ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား သဘောထား ကွဲပြားမှုများဖြစ်ကာ ၁၉၉၄ ခုနှစ်က ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဤကွဲပြားမှုသည် အလွန်အထိနာစေသော ခွဲထွက်မှုဖြစ်ကြောင်း မကြာခင် သက်သေသာဓကများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ကေအန်ယူ၏
အမာခံစခန်းဖြစ်သော သောင်ရင်းနှင့် သံလွင်မြစ်ဆုံရှိ မာနယ်ပလောစခန်း ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။
ခွဲထွက်ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဒီကေဘီအေအလံ လွှင့်ထူကာ မြန်မာစစ်တပ်များကို စခန်းတွင်း လမ်းပြခေါ်ဆောင် သိမ်းပိုက်သွားခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်က အာဏာရစစ်အစိုးရက ဒီကေဘီအေခေါင်းဆောင်များကို သူတို့အနေဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်ကို သူတို့စိတ်ကြိုက် အုပ်ချုပ်နိုင်ပါကြောင်း ကတိပေး ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် ယခုနှစ်အတွင်း ဒီကေဘီအေသည် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ကျေးလက်ဒေသအတွင်း အကြောက်တရားဖြင့် ကြီးစိုးထားကာ မြို့ပြဒေသများတွင် ခြိမ်းခြောက် ငွေညှစ်ခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်များမှာမူ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်ရေးအပေါ် အခွန်များကောက်ခံကာ ကြီးပွါးချမ်းသာလာခဲ့ကြသည်။
ယခင်အပတ်က ထုတ်ဝေခဲ့သော မဲဆောက်အပတ်စဉ်ဂျာနယ် Pan Din Maere (အမိမြေ) တွင် ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ ၉၉၉ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူ မိသားစုနှင့်အတူ အလွန်ကြီး ကျယ်ခမ်းနားသော အိမ်သစ်ရှေ့တွင် ရိုက်ထားသောဓါတ်ပုံနှင့် အတူ သတင်းတပုဒ် ပါလာခဲ့သည်။ မြဝတီမြို့ရှိ အဆိုပါ အိမ်သစ်တက်ပွဲအား မဲဆောက်စာနယ်ဇင်းကိုပင် ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ဤသုံးရက်ကြာ အခမ်းအနားတွင် သုံးဖြုန်းပြလိုက်ခြင်းကြောင့်ပင် ဤပြဿနာများပေါ်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ် သည်။
ဤသို့ အောက်ခြေတပ်သားများ ခွဲထွက်ပုန်ကန်သွားခြင်းကြောင့် ဒီကေဘီအေတွင် မည်မျှထိခိုက်မည်ကို မသိရသေးပေ။ ရာဂဏန်းအချို့မှာ အလွန်များပြားသည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးနှင့်ဆိုလျှင် များသည်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏သစ္စာခံမှု ကိုမရရှိလျှင် စစ်ဘုရင်ဆိုသည်မှာ ဘာမှမဟုတ်တော့ပေ။ ချစ်သူအဘို့ကျန်သူ့တပ်သားများ သူ့ အပေါ်ဘယ်လောက် သစ္စာခံကြသေးသည်ကို တွက်ဆနေရပြီ ဖြစ်သည်။
ကေအန်အယ်လ်အေတပ်ဖွဲ့ရှိရာသို့ ဒီကေဘီအေမှခွဲထွက်အဖွဲ့ဝင်များကူးပြောင်းသွားသည်ကို နအဖ တပ်များက လိုက်လံ ရှာဖွေနေသည်။ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့များအားလုံး နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ အဖြစ် ငြိမ်းချမ်းစွာ ကူးပြောင်းရေးမှာမူ မသေချာလှတော့ပေ။
ဒီကေဘီအေအနေဖြင့် ကေအန်ယူစတင်တည်ထောင်သူ စောဘဦးကြီး၏ မူ ၄ ချက်ဆက်လက် စွဲကိုင်ထားရေးကို ယခုထိဆက်လက်ပြောဆိုနေဆဲဖြစ်သည်။ ယင်းတို့မှာ ကရင့်တော်လှန်ရေးအတွက် လက်နက်ချစကား အလျဉ်းမပြောရ ကရင်ပြည်နယ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ပြီးပြည့်စုံရမည် ကရင့်လက်နက် ကရင့်လက်ထဲတွင် ရှိရမည် ကရင့်ကြမ္မာ ကရင်ဖန်တီးခွင့်ရှိရမည် ထို့ကြောင့် အပြင်ပန်းအားဖြင့်ကြည့်လျှင်မူ ဒီကေဘီအေ သည် နအဖအုပ်စိုးနေမှုကို ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်သည်။
တရားမဝင်ရော၊ တရားဝင်ရော ကုန်သွယ်မှုမှန်သမျှ မည်သည့်ပစ္စည်းအပေါ်တွင်မဆို ဒီကေဘီ အေ ကအကောက်ရနေသည်။ ခေါင်းဆောင်များ အလွန်အမင်းကြွယ်ဝလာခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ကေအန်ယူ၏မိုင်းခင်းများအကြား ခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုများအကြား သွားလာလှုပ်ရှားနေရသော အောက်ခြေစစ်သားများအတွက်မူ သူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးများနှင့် ဘဝအခြားကြီးခြားနေကြရသည်။
သူတို့ခေါင်းဆောင်များမှာ ဒေသခံစာနယ်ဇင်းများတွင် သတင်းဖြစ်နေသော နာမည် ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဖြစ်နေကြသည်။
ဒီကေဘီအေ ကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲရန် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသော ရက်မှာ ယခုစေ့သွားပြီဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးရက်တခုကုန်ဆုံးသွားတိုင်း နအဖ ဘက်ကလည်း ဖိအားကို တရစ်တင်းလိုက်ပြန်သည်။ စစ်အစိုးရ၏အစီအစဉ်မှာ နအဖ အရာရှိများကွပ်ကဲအုပ်ချုပ် သည့် ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ကို ထူထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်အရ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ကို လက်နက်ဖြုတ်မည်။ ယူနီဖောင်းများ လဲဝတ်ရမည်။ ပြီးမှ ပြန်လည်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ စစ်သားများမှာ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁၂ဝဝ နှင့်ညီမျှသောငွေကို လစာအဖြစ်ရရှိကြမည်ဖြစ် သည်။
ဤသို့ပြုလုပ်လျှင် ဒီကေဘီအေမှာ သူ့လာရာလမ်းကိုပင်ကျော်လွန်ကာ စောဘဦးကြီးမူအတိုင်း ဆက်လက်ချီတက်သွားမည့်သဘောရှိနေသည်။
/ 5/04/2010 10:27:00 AM / Comments: (0)
/ 5/03/2010 10:07:00 PM / Comments: (0)
- ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ နအဖ တပ် ခမရ(၄၂၆) သည် အပြစ်မဲ့ ကော်သေးဒဲ ရွာသား၂ဦးဖြစ်တဲ့ စောတာအူးအူး နှင့် စောမင်းနိုင်(ခ)စောတောသူး တို့ ကိုဖမ်း ဆီးခဲ့ပြီး ၁၉.၄.၂၀၁၀ နေ့တွင်စောတာအူးအူး အားနအဖတပ် သည် ပလဲဝတွင် သတ်ပစ်ခဲ့ သည်။ ဒါ့အပြင် ၇.၄.၂၀၁၀ နေ့တွင် စော မင်းနိုင်(ခ)စောတော သူး အား ခလယ်လာအုပ်စု တွင်နအဖတပ်မှ သတ် ပစ်လိုက်သည်။
- ၂၅.၄.၂၀၁၀ နေ့တွင် အောင်စိုးဦး ဦးစီးသောနအဖ တပ် ခလရ(၂၃၁) စစ်ကြောင်း(၂) သည် မြို့ဟောင်းအရပ်သို့ဝင်ရောက်ပြီး ရွာသူ ရွာသား များ အား အတင်းအဓမ္မ တောင်းရမ်းစားခဲ့သည်။ (၁) ဒေါ်ကြည် ၆၀နှစ်၏ ကြက်၂ကောင်၊ အီညာ ၆၁နှစ်၏ကြက်၂ကောင်၊ (၃) ဖားလားလု ၄၂နှစ်၏ ကြက်၎ကောင်၊ (၄) မူကော်လာ ၃၇နှစ်၏ ဆန်၊(၅)ဒေါ်စောလှ ၉၆နှစ်၏ ကြက်၁ကောင်၊ (၆)ဒေါ်အေး ကြယ်၇၀နှစ်၏ကြက်၁ကောင်နှင့်ဆန်၊ (၇) စောသွီလား ၃၅နှစ်၏ကြက်၁ကောင် တို့ အတင်းအဓမ္မတောင်းရမ်းခဲ့ သည်။
/ 5/03/2010 08:37:00 PM / Comments: (0)
/ 5/03/2010 08:33:00 PM / Comments: (0)
ယုတ်မာ ပက်စက်မှု ကတော့ ပြိုင်စံရှား စစ်ခွေးအုပ်စုပါပဲဗျာ...ထမင်းစားပြီး လူ့အသိစိတ် မရှိတဲ့ကောင်တွေကို မြန်မြန် ဝဋ်လည်ပါစေ လို့.....
/ 5/02/2010 11:14:00 PM / Comments: (0)
VOA သတင်း မှ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်မြို့တော်က အဓိကကျပြီး လူစည်ကားလှတဲ့ Times Square မှာ ကားဗုံးထောင်ထားတာကို အချိန်မီ သိလိုက်ပြီးတဲ့နောက် တာဝန်ရှိသူတွေက အဲဒီနေရာကို လူအသွားအလာ ရပ်ပစ်ပြီး ကားဗုံးကို ရှင်းလင်းခဲ့ရပါတယ်။ အခုတော့ Times Square ကို ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်း တခုပါတဲ့ ကားတစီးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကားဗုံးသာ ပေါက်ကွဲခဲ့မယ်ဆိုရင် လူတွေ အများကြီး သေသွားနိုင်တယ်လို့ နယူးယောက်ခ်မြို့တော်ဝန် မိုက်ကယ် ဘလွမ်းဘာ့ဂ် (Michael Bloomberg) က ပြောပါတယ်။
ကားဗုံးကို စနေနေ့ညပိုင်းမှာ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်တုန်းက ဗုံးဟာ ပေါက်ကွဲတော့မယ့် အဆင့်ကို စလုပ်နေပုံရပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်ဘဲ ပျက်သွားခဲ့တယ်လို့ နယူးယောက်ခ်မြို့တော် ရဲချုပ်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူကို ကိုးကားပြီး နယူးယောက်တိုင်းမ်စ် သတင်းစာက ရေးပါတယ်။
သံသယဖြစ်ဖွယ် ကားတစီးကို စုံစမ်း စစ်ဆေးဖို့အတွက် ဗုံးရှင်းလင်းရေး အဖွဲ့ကို စေလွှတ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီကားထဲမှာ ပရိုပိန်း ဓာတ်ငွေ့ဘူးတွေ၊ ဓာတ်ဆီပုံးတွေ၊ စီးပွားဖြစ်အဆင့် မီးရှူးမီးပန်း လောင်စာတွေနဲ့ ချိန်ကိုက်ပစ္စည်းတွေ ပါတယ်လို့ မြို့တော်ဝန် ဘလွမ်းဘာ့ဂ်က ပြောပါတယ်။
ကားဗုံးဖောက်ခွဲဖို့ ဘယ်သူက လုပ်တယ်ဆိုတာ အာဏာပိုင်တွေ မသိသေးပေမဲ့ FBI နဲ့ တခြား အဖွဲ့အစည်းတွေက လိုက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ နယူးယောက်ခ် မြို့တော်ဝန်က ပြောပါတယ်။
ဒီကေဘီအေ အချင်းချင်း သဘောထားကွဲ လူထု စစ်ပွဲဖြစ်မည်...
ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ခွင့်ရမှသာ Kurt Campbell မြန်မာနိုင်ငံ...
အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော် စစ်အစိုးရ မတရားမှုတွေကို ပြစ်တ...
18-year-old Arakan Woman Raped by Burma Army Capta...
မြန်မာစစ်အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိတည်ရေး လူ့အခွင့်အေ...
တောင်ပေါ်သား လူနည်းစုများကို ပေါ်တာ အဖြစ် နအဖ စစ်တပ်...
ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ကို နအဖ ပြန်လည်စည်းရ...
နယူးယောက်ခ်မြို့လယ် Times Square မှာ ကားဗုံးတွေ့ရှ...